ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေက တစ်သက်တာသူငယ်ချင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ – Gentleman Magazine
17/06/2017 22/06/2017 escapetravelmagazine
ကြောငျးတကျရတဲ့ ကြောငျးသားဘဝဟာ သငျ့ဘဝရဲ့အကောငျးဆုံးအခြိနျတှဖွေဈမှာပါ။ ဘဝအတှကျ စိုးရိမျစရာသိပျမမြားတာကွောငျ့ ဆိုတာထကျ ကြှနျတျောတို့ဘေးမှာရှိနတေဲ့ အပေါငျးအသငျးတှကွေောငျ့လို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှပေါ။ သူတို့နဲ့အတူ ရယျမောပြျောရှငျရမယျ၊ ပထမဆုံးတဖကျသတျခဈြသူအကွောငျး ဝမြှေခှငျ့ရမယျ၊ စိတျကူးပေါကျတဲ့အရာတှမှေနျသမြှ အတူတူလြှောကျလုပျကွမယျ စတာတှကေ တဈသကျတာလုံးအတှကျ ခိုငျမာတဲ့ခညျြနှောငျမှုတဈခု ဖွဈလာစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှကေ တဈသကျတာသူငယျခငျြးဖွဈနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ရုပျရှငျအတူတူကွညျ့ကွတာ၊ သီခငျြးအမြိုးအစားတဈခုထဲကိုပဲ အတူတူနားထောငျကွတာ၊ ကြောငျးလြှောကျလမျးမှာ အတူတူလမျးလြှောကျကွတာ၊ အတနျးလဈကွတာ၊ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကာကှယျပေးကွတာ၊ အိမျစာတှေ ကူးပေးကွတာ စတာတှကေ ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူတူလုပျဖွဈခဲ့တာတှထေဲက တဈခြို့ဖွဈပါတယျ။ ဒါတှကေပဲ သငျ့ရဲ့ကိုယျရညျကိုယျသှေးကို ပုံဖျောထားပွီး ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာ သငျ့က ဘယျလိုလူလဲဆိုတာကို သတျမှတျဖျောဆောငျနိုငျတဲ့ အရာတှဖွေဈပါတယျ။
၂။ အမွဲတမျးသူတို့ဆီ ပွနျသှားလို့ရတယျ
ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ဆိုရငျ ဟိုအရငျအခြိနျတှတေုနျးကလို ရယျမောပြျောရှငျစရာတှကေို ဝမြှေပွီး အရငျအခြိနျကို ပွနျရောကျသှားသလို ခံစားရစပေါတယျ။ တဈခါတဈလမှော ဘဝရဲ့ရုနျးကနျလှုပျရှားရမှုတှကွေောငျ့ မှတျဉာဏျအဟောငျးတှကေို မသှေ့ားလရှေိ့ပါတယျ။ ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှကေ ဒီမှတျဉာဏျတှကေို ပွနျဖျောထုတျနိုငျကွပါတယျ။
၃။ ဘယျလိုအခွအေနဖွေဈဖွဈ အတူတူရှိနပေေးကွတယျ
ကြောငျးမှာ ကောငျမလေးတဈယောကျကွောငျ့ အရှကျကှဲရရငျပဲဖွဈဖွဈ၊ အခွားတဈယောကျယောကျနဲ့ ရနျဖွဈတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ သငျ့ဖကျကရပျတညျပေးတဲ့သူတှကေ သငျ့သူငယျခငျြးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့က သငျ့အနာဂတျမှာလညျး အောငျမွငျသညျဖွဈစေ၊ ရှုံးနိမျ့သညျဖွဈစေ သငျ့ကိုအားပေးဖို့ ရှိနမှောပဲဖွဈပါတယျ။
၄။ သငျ့ကို ဘယျတော့မှ မငွိုငွငျဘူး
ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှေ နားမှာရှိနရေငျ သငျကိုယျသငျ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈနပွေီး အရှိအတိုငျးပွောဆိုဆကျဆံနလေို့ ရပါတယျ။ အမွငျနဲ့အကဲဖွတျပွီး အထငျသေးခံရမှာကို စိုးရိမျပွီး ဟနျလုပျနစေရာမလိုပါဘူး
၅။ တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျ အကုနျအစငျသိကွတယျ
ကြောငျးတကျခြိနျမှာဆိုရငျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူရှိခြိနျတှမြေားတဲ့အတှကျ တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျက ကောငျးကောငျးသိကွပါတယျ။ ဒီအခကျြကွောငျ့ပဲ သူငယျခငျြးအဖှဲ့တှအေတှငျးမှာ ခိုငျမာတဲ့ သံယောဇဉျတှေ ဖွဈတညျလာတာဖွဈပါတယျ။
၆။ သငျနဲ့ သငျ့သူငယျခငျြးတှကေ အကောငျးဆုံးအဖှဲ့အစညျးပဲ
သငျ့ရဲ့ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှဆေုံ့တဲ့အခြိနျတိုငျးမှာ ပြျောစရာတှဖွေဈဖို့ တကူးတကလုပျနစေရာ မလိုပါဘူး။ အခငျြးခငျြး စကွနောကျကွ၊ အရငျတုနျးကအကွောငျးတှေ ပွနျပွောကွ၊ လကျရှိအလုပျထဲက သူဌေးအကွောငျး၊ တဈဖကျစားပှဲက ကောငျမလေးအကွောငျး စသဖွငျ့ ပွောကွဆိုကွနဲ့ ပြျောစရာကောငျးနမှော အမှနျပါပဲ။
၇။ ထူးထူးခွားခွားတဈခုကွုံတိုငျး လုပျဆောငျတတျတဲ့ ထုံးစံတဈခုခုရှိကွတယျ
ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးအဖှဲ့ထဲက တဈယောကျ ပထမဆုံးအိမျထောငျကွတဲ့အခါ တဈနရောရာကို ခရီးအတူသှားကွတာ၊ တဈယောကျယောကျ ရာထူးတိုးမွှငျ့ခံရလို့ သောကျပှဲကငျြးပါကွတာ စတဲ့ ထုံးစံလေးတှကေ သငျတို့သူငယျခငျြးတသိုကျကို အကောငျးဆုံးပြျောရှငျမှုတှေ ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။
၈။ မိသားစုအခငျြးခငျြးရငျးနှီးပွီး ကိုယျ့မိသားစုလိုပဲ ဆကျဆံကွတယျ
သူငယျခငျြးတှရေဲ့ မိဘတှကေ သငျ့ရဲ့ဒုတိယမိဘတှလေိုပါပဲ။ သူတို့ကလညျး သငျ့ကိုအူမခြေးခါးမကနျြသိထားပွီး သူတို့ရဲ့သားအရငျးလိုပဲ ယုံကွညျကွပါတယျ။ မိသားစုအခငျြးခငျြးကလညျး အလုပျအကိုငျနဲ့ပတျသကျတာက စပွီး ညစာဘာခကျြရမလဲဆိုတာထိ အပွနျအလှနျအကွံပေးတတျကွသူတှေ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
၉။ ပွနျပွီးအောကျမတေ့မျးတစရာ ဓာတျပုံတှေ အမြားကွီးရှိတယျ
ကြောငျးလလေ့ာရေးခရီးသှားတုနျးက အရှကျကှဲခဲ့တဲ့အခိုကျအတနျ့၊ ကြောငျးပွီးသှားတဲ့အခြိနျမှာ တသသဖွဈရတဲ့ အခိုကျအတနျ့ စသဖွငျ့ အခိုကျအတနျ့ပေါငျးမြားစှာကို ဓာတျပုံတှကေနတေဆငျ့ ပွနျပွီး အမှတျရ လှမျးဆှတျကွရပါတယျ။
၁၀။ သငျ့ကို ကူညီပေးတဲ့အဖှဲ့ဖွဈတယျ
ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှကေ သငျ့ရဲ့ပုဂ်ဂိုဟျရေးအကွံပေးတှဖွေဈပါတယျ။ သငျအလိုအပျဆုံးအခြိနျတှမှော သူတို့ကပဲ ကူညီပေးပွီး သငျ့အခကျအခဲကို သူတို့လောကျ စိတျရှညျလကျရှညျနားထောငျပေးနိုငျတဲ့သူ တှမှေ့ာမဟုတျပါဘူး။
၁၁။ စုံတှဲတှေ၊ အတနျးဖျောတှနေဲ့ပတျသကျတဲ့ ဇာတျလမျးတှေ အမွဲကွားရတယျ
ဒီအခကျြက ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးကောငျးတှရေဲ့ အကောငျးဆုံးအခကျြလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ အတနျးဖျောတှထေဲမှာ ဘယျသူကတော့ အိမျထောငျကသြှားပွီ၊ ဘယျသူကတော့ တိုငျပတျနတေယျ စသဖွငျ့ သတငျးပုလငျးအစုံအလငျကို သိရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၂။ သူငယျခငျြးတဈယောကျယောကျ ကနျြခဲ့တဲ့ပစ်စညျးတဈခုခု ရှိနတေတျတယျ
ကြောငျးနဖေကျ သူငယျခငျြးတှကွေားမှာ တဈယောကျအိမျမှာ တဈယောကျလိုကျအိပျတဲ့အခြိနျတှေ ရှိတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ပစ်စညျးတှေ အပွနျအလှနျကနျြခဲ့ကွတာ၊ မယူဖွဈတော့ပဲ ဒီအတိုငျးထားလိုကျတာတှကေ တဈခြိနျပွနျတှတေဲ့အခါ ကွညျနူးပြျောရှငျစရာ အခြိနျတှကေို အမှတျရစပေါတယျ။
၁၃။ သူတို့နဲ့အတူ မနှဈသကျတဲ့ ဘာသာရပျတှကေို သငျယူနိုငျခဲ့တယျ
ကြောငျးတကျတဲ့အခါမှာ မသငျခငျြလောကျအောငျ မုနျးတဲ့ဘာသာရပျတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဒီဘာသာရပျတှကေိုလညျးပဲ သူငယျခငျြးတှကွေောငျ့ တကျရငျးသငျရငျးနဲ့ အောငျမွငျစှာကြျောဖွတျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၁၄။ ကလေးဘဝရဲ့ လြို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ ရှကျစရာကိစ်စတှေ အားလုံးသိကွတယျ
ကြောငျးနဖေကျ သူငယျခငျြးတှဆေိုတာ သငျ တဈဖကျသတျကွှခေဲ့တဲ့ ကောငျမလေးတှေ၊ အရှကျကှဲခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျတှေ အားလုံးကို သိထားကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ အိမျပွနျဖို့ လမျးစရိတျမရှိတော့တဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ ဘယျလိုအခကျအခဲမြိုးပဲကွုံကွုံ သူတို့က သငျ့မိဘတှမေသိစပေဲ လာရောကျကယျတငျမယျ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
ကျောင်းတက်ရတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေဖြစ်မှာပါ။ ဘ၀အတွက် စိုးရိမ်စရာသိပ်မများတာကြောင့် ဆိုတာထက် ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူတို့နဲ့အတူ ရယ်မောပျော်ရွှင်ရမယ်၊ ပထမဆုံးတဖက်သတ်ချစ်သူအကြောင်း ဝေမျှခွင့်ရမယ်၊ စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှ အတူတူလျှောက်လုပ်ကြမယ် စတာတွေက တစ်သက်တာလုံးအတွက် ခိုင်မာတဲ့ချည်နှောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေက တစ်သက်တာသူငယ်ချင်းဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်ကြတာ၊ သီချင်းအမျိုးအစားတစ်ခုထဲကိုပဲ အတူတူနားထောင်ကြတာ၊ ကျောင်းလျှောက်လမ်းမှာ အတူတူလမ်းလျှောက်ကြတာ၊ အတန်းလစ်ကြတာ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကာကွယ်ပေးကြတာ၊ အိမ်စာတွေ ကူးပေးကြတာ စတာတွေက ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထဲက တစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကပဲ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပုံဖော်ထားပြီး ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ သင့်က ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အမြဲတမ်းသူတို့ဆီ ပြန်သွားလို့ရတယ်
ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုရင် ဟိုအရင်အချိန်တွေတုန်းကလို ရယ်မောပျော်ရွှင်စရာတွေကို ဝေမျှပြီး အရင်အချိန်ကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရစေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘ၀ရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှုတွေကြောင့် မှတ်ဥာဏ်အဟောင်းတွေကို မေ့သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေက ဒီမှတ်ဥာဏ်တွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်နိုင်ကြပါတယ်။
၃။ ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် အတူတူရှိနေပေးကြတယ်
ကျောင်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကြောင့် အရှက်ကွဲရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ဖက်ကရပ်တည်ပေးတဲ့သူတွေက သင့်သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်အနာဂတ်မှာလည်း အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရှုံးနိမ့်သည်ဖြစ်စေ သင့်ကိုအားပေးဖို့ ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သင့်ကို ဘယ်တော့မှ မငြိုငြင်ဘူး
ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေ နားမှာရှိနေရင် သင်ကိုယ်သင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေပြီး အရှိအတိုင်းပြောဆိုဆက်ဆံနေလို့ ရပါတယ်။ အမြင်နဲ့အကဲဖြတ်ပြီး အထင်သေးခံရမှာကို စိုးရိမ်ပြီး ဟန်လုပ်နေစရာမလိုပါဘူး
၅။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် အကုန်အစင်သိကြတယ်
ကျောင်းတက်ချိန်မှာဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူရှိချိန်တွေများတဲ့အတွက် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်က ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့တွေအတွင်းမှာ ခိုင်မာတဲ့ သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်တည်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ သင်နဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေက အကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းပဲ
သင့်ရဲ့ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ပျော်စရာတွေဖြစ်ဖို့ တကူးတကလုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ အချင်းချင်း စကြနောက်ကြ၊ အရင်တုန်းကအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောကြ၊ လက်ရှိအလုပ်ထဲက သူဌေးအကြောင်း၊ တစ်ဖက်စားပွဲက ကောင်မလေးအကြောင်း စသဖြင့် ပြောကြဆိုကြနဲ့ ပျော်စရာကောင်းနေမှာ အမှန်ပါပဲ။
၇။ ထူးထူးခြားခြားတစ်ခုကြုံတိုင်း လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ထုံးစံတစ်ခုခုရှိကြတယ်
ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက် ပထမဆုံးအိမ်ထောင်ကြတဲ့အခါ တစ်နေရာရာကို ခရီးအတူသွားကြတာ၊ တစ်ယောက်ယောက် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရလို့ သောက်ပွဲကျင်းပါကြတာ စတဲ့ ထုံးစံလေးတွေက သင်တို့သူငယ်ချင်းတသိုက်ကို အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
၈။ မိသားစုအချင်းချင်းရင်းနှီးပြီး ကိုယ့်မိသားစုလိုပဲ ဆက်ဆံကြတယ်
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မိဘတွေက သင့်ရဲ့ဒုတိယမိဘတွေလိုပါပဲ။ သူတို့ကလည်း သင့်ကိုအူမချေးခါးမကျန်သိထားပြီး သူတို့ရဲ့သားအရင်းလိုပဲ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မိသားစုအချင်းချင်းကလည်း အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တာက စပြီး ညစာဘာချက်ရမလဲဆိုတာထိ အပြန်အလှန်အကြံပေးတတ်ကြသူတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၉။ ပြန်ပြီးအောက်မေ့တမ်းတစရာ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီးရှိတယ်
ကျောင်းလေ့လာရေးခရီးသွားတုန်းက အရှက်ကွဲခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်၊ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ တသသဖြစ်ရတဲ့ အခိုက်အတန့် စသဖြင့် အခိုက်အတန့်ပေါင်းများစွာကို ဓာတ်ပုံတွေကနေတဆင့် ပြန်ပြီး အမှတ်ရ လွမ်းဆွတ်ကြရပါတယ်။
၁၀။ သင့်ကို ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်
ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုဟ်ရေးအကြံပေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလိုအပ်ဆုံးအချိန်တွေမှာ သူတို့ကပဲ ကူညီပေးပြီး သင့်အခက်အခဲကို သူတို့လောက် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်ပေးနိုင်တဲ့သူ တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၁။ စုံတွဲတွေ၊ အတန်းဖော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ အမြဲကြားရတယ်
ဒီအချက်က ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းကောင်းတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အတန်းဖော်တွေထဲမှာ ဘယ်သူကတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီ၊ ဘယ်သူကတော့ တိုင်ပတ်နေတယ် စသဖြင့် သတင်းပုလင်းအစုံအလင်ကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက် ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခု ရှိနေတတ်တယ်
ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ တစ်ယောက်အိမ်မှာ တစ်ယောက်လိုက်အိပ်တဲ့အချိန်တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပစ္စည်းတွေ အပြန်အလှန်ကျန်ခဲ့ကြတာ၊ မယူဖြစ်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်တာတွေက တစ်ချိန်ပြန်တွေ့တဲ့အခါ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ အချိန်တွေကို အမှတ်ရစေပါတယ်။
၁၃။ သူတို့နဲ့အတူ မနှစ်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်
ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာ မသင်ချင်လောက်အောင် မုန်းတဲ့ဘာသာရပ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်တွေကိုလည်းပဲ သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် တက်ရင်းသင်ရင်းနဲ့ အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ ကလေးဘ၀ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ရှက်စရာကိစ္စတွေ အားလုံးသိကြတယ်
ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ သင် တစ်ဖက်သတ်ကြွေခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတွေ၊ အရှက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အားလုံးကို သိထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ဖို့ လမ်းစရိတ်မရှိတော့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲကြုံကြုံ သူတို့က သင့်မိဘတွေမသိစေပဲ လာရောက်ကယ်တင်မယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
Previous: သာမန်လူများနှင့် လူချမ်းသာများကို ကွဲပြားခြားနားစေသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ
Next: ဘယ်လို ချစ်သူမျိုးလဲ ???
Oral Sex နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေတွေးကြလဲ??
တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းရဲ့ အကျိုး ၅ ခု